River's Edge e-White House e-Bowman
Bowman, New South Wales, i-Australia
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Tiny Away
Imigwaqo yasemaphandleni ebukekayo iholela endaweni yethu yokubalekela enhle yasemakhaya lapha e-Gloucester.
Setha endaweni ezungezile efana nepaki, uhlabeke umxhwele njengoba ukuhlala kwakho kuzokwakhiwa yizihlahla, amagquma kanye nomfula i-Bowman River. Thola indawo yepikiniki, imbobo yokubhukuda, i-platypus, uzilolonge i-golden panning, konke ngesikhathi ulalele imisindo yehlathi lase-Aussie. Ebumnyameni obupholile ebusuku thatha imfihlakalo yesibhakabhaka njengoba uhlezi eduze nomgodi womlilo ukuze uthole ingxoxo evamile.
Indlu yakho encane equkethe wena iphakathi kwamahektha angu-11 lapho umfula ubonakala futhi uhamba nje isikhashana nje, hlola indawo okuzungezile, ujabulele i-BBQ, ubase umlilo, noma uyobuka indawo.
Siyakwamukela ekubalekeni kwedolobha lethu eliphelele ukuze uphumule, uphumule futhi usethe kabusha.
Indlu yethu encane iyisitudiyo esihle esingu-155 sqft. Inikeza izivakashi indawo yokuhlala enethezekile nekhishi lakhona elihlome kahle, eliphelele onombhede olingana nendlovukazi, igumbi lokugezela eline-ensuite, isiphephetha-moya kanye nezinto zokufudumeza. Iphelele kubantu abangu-2!
Ikhishi linakho konke okudingayo ukuze upheke ngakho ukudla okulula. I-cooker ephathekayo, i-cookware, izitsha zokupheka, izinto zokusika, izitsha nezinto zesiliva, i-microwave kanye nesiqandisi esincane. I-cooker ephathekayo ingagcinwa emakhabetheni uma ingasetshenziswa ukuze kwandiswe isikhala.
Izindlu zangasese zethu zilandela izimiso ezisimeme ngokwezemvelo, okuhlanganisa nendlu yangasese yomquba engenamanzi, isitsha sokugeza izandla kanye neshawa (igesi eshisisa izihlambi ezishisayo). Esimeni esinzima sesimo sezulu sase-Australia sokusha kwehlathi nesomiso, sisiza ekongeni indawo ezungezile ngokulondoloza amanzi sisebenzisa indlu yangasese evumelana nemvelo. Imfucuza idilizwa endlini yangasese yomquba ngokusebenzisa inqubo yokubola kwe-aerobic. Iwuhlelo olungenamanzi (asikho isidingo sokugezwa!), kanti indlu yangasese evamile eshaywa kabili ingasebenzisa amanzi afika ku-350L ngesonto. Ifeni yokungenisa umoya isiza enqubweni yokubola futhi inciphise iphunga.
Uma usebenzisa insipho yakho, ishampoo, inhlama yamazinyo, sicela ukuthi ulethe ezingabolayo ukuze ukugeleza kwamanzi ampunga kungalimazi imvelo. Ngiyabonga!
I-Gloucester isango lokuya ehlane eliwumbukwane nokuzijabulisa. Ukusuka ehlathini uhamba ehlathini lemvula lasendulo ukuya ku-kayaking eMfuleni iBarrington kanye nokukhempa okubukekayo. Uzothola izimakethe zendawo kanye neminyango ye-cellar.
Buyela emuva esikhathini sesigebengu esidumile sasendaweni uKapteni Thunderbolt eGloucester Museum, enezinto zobuciko ezisukela ngo-1826. Ifa lethu legolide lisho ngisho "ne-Bowman River Goldfields" ngo-1879. Izindawo zasemakhaya manje sezingathengwa kakhulu izingodo. , amadlelo & ukulima ubisi.
Ibungazwe ngu-Tiny Away
UTiny Away Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Bowman namaphethelo